I-Samsung Galaxy Ace kunye ne-Samsung Galaxy Mini, ii-smartphone ezimbini ezintsha ze-android eSpain | I-Androidsis
Isamsung yaseSpain isandula ukubhengeza ukongezwa kweetheminali ezimbini ezitsha kwikhathalogu yayo ye-smartphone ngenkqubo ye-Android efumanekayo eSpain, yiyo Galaxy Ace kunye Galaxy Mini, usapho lweGalufa luyakhula kwaye lukhula. Iitheminali ezimbini eziphakathi kuluhlu ezigqibezela uluhlu lweetheminali zenkampani yaseKorea.
1 I-Samsung Galaxy Ace, iphupha le-iPhone yasehlotyeni
2 Isamsung Galaxy Mini, mini nyani.
I-Samsung Galaxy Ace, iphupha le-iPhone yasehlotyeni
Esi sixhobo sithethe ngaso ngokungafaniyo kwangaphandle kwe-Apple iPhone entsha sifikelela kwimakethi yaseSpain kwaye nangona ngaphandle ukufana kwayo kungaphaya kokufanelekileyo nge-iPhone, yonke into iphelela apho. bucala ngasekhohlo Ifowuni ye-Android Sisiphelo sendlela esiphakathi nendawo enesikrini se-TI-LCD ye-3,5-intshi kunye nesisombululo seepikseli ezingama-320 × 480. Umphefumlo wayo yiprosesa yeQualcomm ngesantya sama-800 Mhz nangona nangona ingezizo ezakutshanje kwiiprosesa esicinga ukuba ziya kuba ngaphezulu kokulingeneyo ukuqhuba nohlobo lwe-Android 2.2 okanye iFroyo leyo endiyifakileyo ifakiwe.
Ewe kunjalo I-Galaxy Ace inezo zonke iintlobo zonxibelelwanoI-Wifi 802.11 b / g / n, i-Bluetooth, i-A-GPS, indawo encinci yekhadi le-SD kunye neefowuni zentloko. Ayinasilela nokuba kukukhawulezisa okanye isantya sokuziva kunye nekhampasi yedijithali. Yonke imiba efunwa nguGoogle ukuba iMakethi ye-Android ifakwe njengomgangatho kunye nokusetyenziswa kwayo okungaphezulu kwama-200.000.
Ngasemva sifumana ikhamera ye-5 Mpx ene-autofocus kunye ne-flash ye-LED, ngaphezulu kokwaneleyo ekusebenziseni okuqhelekileyo kolu hlobo lwekhamera kwi-Smartphone.
Isamsung Galaxy Mini, mini nyani.
Isiphelo esincinci kwabo bafuna i-smartphone ekulungeleyo ukuyiphatha, ukukhanya kodwa kwangaxeshanye kukwazi ukudityaniswa iiyure ezingama-24 ngosuku. Sukulindela ukutsha kwetekhnoloji kodwa iseti yeenkcukacha eziza kwenza ukuba kunye nexabiso lalo (esicinga ukuba liya kuba sezantsi kakhulu) iya kuba lukhetho oluninzi olukhethiweyo.
El I-Samsung Galaxy Mini Inesikrini esingu-3,14-intshi kunye nesisombululo sama-pixels angama-320 × 240. Iprosesa yayo isebenza ngesantya sama-600 Mhz kwaye ingakanani emqolo wayo ngekhamera eyi-3 Mpx ngaphandle kweflash okanye i-autofcous.
I-A-GPS yayo, uqhagamshelo lweBluetooth kunye neWifi 802.11 b / g / n iya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo ukuze ubomi bakho kwiinethiwekhi zentlalo bungaphazanyiswa. Kule nto kufuneka songeze i-accelerometer, ikhampasi yedijithali kunye ne-proximity sensor ukugqiba ezona nkcukacha zibalulekileyo zale nto intsha I-Mini Mini.
Iza ne-Android 2.2 kunye nokufikelela kwizicelo ezikhoyo kwiNtengiso ye-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy Ace kunye ne-Samsung Galaxy Mini, ii-smartphone ezimbini ze-android eSpain
«Yonke into iphelile» ...
IINKCUKACHA ZAM ZI-HOGOSSSSSSSSSSSS
Uxolo, kodwa igama lokujonga ngamanye amaxesha lidlala amaqhinga
Ulahlekile «Fit» kunye «Gio», emfanekisweni bobabini abaphakathi.
I-Fit ineprosesa ye-600MHz, 3.31 ″ QVGA (320 × 240) kunye nekhamera ye-5 megapixel.
Kwaye i-del Gio yaziwa kuphela ngokuba ine-3.2 ″ HVGA (320 × 480) isikrini.
Ezo ndawo zimbini zokuphawula azivezwanga kwintengiso yaseSpain. 🙂
Okokugqibela, amaqela amabini anokufikelela ngaphandle kokuthengisa izintso.
Imibuliso evela eArgentina kunye neLuck
Nceda ndicela undincede ndifakele umxholo kwi-Samsung Galaxy Ace, ndiyoyika ukwenza ingxaki kwaye andikhuthazwa, nceda undiphendule !!
Ndineqela elifanayo kunye nokubeka imixholo phakathi kweemarike kwaye ukusuka apho uzikhuphele nje faka igama lokuvula kwiinjini yokukhangela kwaye sele ukhetha enye kwaye bangabazali kakhulu, kwaye xa ungathandi ukuyikhupha okanye Cinezela iqhosha lokuqalisa kwaye ukhethe i-Android launcher kwaye sele ilula kakhulu okanye ungangena kumphathi womsebenzi kwaye uphelise isicelo kwaye ngoku, ndiyathemba ukuba uyaqonda kwaye kuyasebenza
Nceda undixelele ukuba ndingayivula njani i-graf mini yeSamsun, ndifumana ukuba kufuneka ndiyisuse kodwa andinalwazi lokuba ndingayenza njani loo nto.
Iindaba ezithi i-HoneyComb isizisa ngokweenkcukacha